AutoCAD waxay ku noqotaa Mac - Geofumadas
AutoCAD waxay ku noqotaa Mac
Oktoobar, 2010 AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub
Shaki kuma jiro in duniga Macku fiican yahay, laakiin had iyo jeer shaki kasta oo ku saabsan guuritaanka waxay ahaayeen: Maxaan ku sameeyaa AutoCAD?
Yaa rumaysan lahaa, ka dibna 1994 AutoCAD R13c42b ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee aan aragno kala badhkii Powermacintosh. Sanad kadib 18, wuxuu ku soo noqdaa AutoCAD Mac Macadka, isla sannadkaas wuxuu sidoo kale ka soocay Linux.
Maxaa dhacaya waa in Mac aan halkii uu ku dhiman lahaa xayiraad doorasho ah, halkaasoo aysan jirin wax tartan ah marka loo eego doorashada (Graphics), ayaa sii koradhay qalabka si heer sare ah loo aqbalo. Qofna shaki kuma jiro tiknoolojiyada Macallimiinta, waxay shaki gelin doonaan laba ka mid ah burradas in waqti ka waqti waxaa loo aaneeyey Steve JobsLaakiin istaraatijiyad Apple ayaa u bilowdo waxyaabaha u fiican, sida in ay dhacdo iPod, iPhone iyo iPad hadda ah wax kasta oo dhaleeceyn kasi waxtar leh ogahay waa boosteejo ah oo ku saabsan taas oo ay u dhisaan codsiyada garaafyada iyo ma phone a aqrinayaa sanduuqa size.
Marka laga hadlayo AutoDesk, inkasta oo ay tahay tan ugu weyn ee deegaanka CAD ah marka loo fiiriyo booska suuqyada, oo leh yar yar oo tickles ah oo ka dhigaya tartamada sida Microstation, IntelliCAD, DataCAD iyo ArchiCAD, oo ka baxsan dhexdhexaadinta rayidka, ayaa ku guulaysatay bii'ada naqshadeynta iyo warshadaha sanadaha soo socda. Waxyaabaha sida Maya Waxay yihiin raaxo, si ay u bixiyaan tusaale.
Markan, AutoCAD ma aha in booska waqtiga. Waxaa markii uu ka tagay dhar cad line Apple la dagaalamaya dalka in uu doonayo in uu ku guuleysto Powerz iyo ArchiCAD haa sii Mac. Anigu ma rabto jeediya intuu ku laysaan si ay u iibsadaan Softdesk iyo Autoarchitect oo raba inay wax badan ka samayn badan oo kaliya khadadka, arrimaha Intergraph iyo waxa uu ahaa awood (ma aha in tirada laakiin qiiqa xidiguhu).
Iyo waxa AutoCAD ku guulaysto markaad tagto Mac.
Elemental qaaliga ah ee Watson. La shaqaynta Mac waxay noqon laheyd mid ka faa'iideysanaya khayraadka si ay ula tacaalaan xusuusta PC-yada aan sii dheereynin. ah Sababaha 10 in AutoDesk ay isku daydo in ay isku daydo AutoCAD for mac oo ay ku saleysan tahay, halkaas oo degdeg ah in dhammaan PC-ga waxaan ku dhufanay 64 iyo si lama filaan ah Mac, sababtoo ah waxaa jira wax badan oo awood ah Monster.
Waxaan ognahay in macnaha cad ee aan macquul aheyn uusan gaari doonin muddada gaaban si uu u yeesho saamiga ka sarreeya sida ay hadda u leeyihiin PC-ga. Laakiin waad ka adkaan kartaa -oo isagu mar buu ka samatabbixiyaa- qalab mobile. Sidoo kale, aynu ogaanno, haddii tiknoolajigu u dhimanayo, waxaa hubaal ah in uu yahay PC, inaysan ka mid ahayn mana aha Mac Mac Apple. Inkasta oo dadka isticmaala desktop iyagu ma dhiman doonaan.
Sidaa darteed AutoDesk waxay u socotaa Mac, qayb ahaan sababtoo ah macaamiishii codsiyada CAD ee hore u codsaday iyo qayb ahaan sababtoo ah raadinta meel bannaan oo leh arjiyada muuqaalka / animation. Inkastoo aysan guureynin, caymisku wuxuu raadinayay in uu lafaguro qalab mobile iyo kuwa kale qalabka kuwaas oo ku jira foornada cad; waxaan ka hadalnaa codsiyada Iphone iyo Ipad, taas oo dhan lammaaneMashruucyada CAD-du waxay abuurayaan boodhadhka.
Kala duwanaanta iyo isku midka
AutoCAD 2011 ee Macku waxay leedahay ku dhawaad ​​isla shaqeynta PC-ga. Iyada oo kala duwanaanshaha kala duwan sida:
dhexgalka iyo su'aalaha Ribbon Mana aha arrimahan oo kale, laakiin waxay ku habboon yihiin qaabka Macaladaha Mac.
Intaa waxaa dheer inaad ka faa'iideysan karto dhammaan jardiinooyinka jestling ee jiirka jilicsan.
Qaar ka mid ah sababaha qariibka ah ee la yimid markii AutoCAD soo baxay, oo la yimid AutoDesk ma iman. Anigu waxaan tixraacayaa sida loo xakameynayo lakabyada, lakabyo fejis ah iyo qashin xaashid ah, kuwa hoosta ku yaalla, kuwa ku jira qaybahaas waxay badbaadiyeen adduunka wakhtiga daabacaadda. Inkastoo ay hubaal tahay inay iman doonaan midka xigta.
Ma jiraan wax taageero ah oo lagu soo dhoofiyo dgn, dhoofinta pdf ama dwf.
Sida iska cad, ma jiri doonaan qalabka Windows, sida Visual Basic Applications, OLE Objects ama Audio Audio. Tani waa khasaare weyn haddii aad horumar u heshay halkan, laakiin haddii aad maamusho kuwa la dhisay AutoLisp (Lacagta DCL), waxaad sidoo kale ka saartaa aqlabiyadda ee ObjectARX.
Kuma socon doonin 32, 64 oo keliya. Waxaadna weydiisaa 3 GB RAM, iyo inaadan kugula talin 4 GB.
Sida taageerida qaabka, waxay taageeri doontaa R14, 2000, 2004, 2007 iyo 2010. Iyo haddii uu jiro qof doonayo inuu arko waxa ukuntu u eg tahay brontosaurus, wuu qaban karaa badbaadi sida dxf R12. Waxaan ku adkeysanayaa, ha akhrin dgn.
Nidaamka maxkamadaynta ee 30 maalmood.
AutoDesk waxay soo diyaarisay xoriyatal bilaash ah oo ah xawaaladaha 30 si loo tijaabiyo. Marka lagu daro machadyada waxbarashada waxaa had iyo jeer ah ikhtiyaarada liisamada ujeedadaas. Ka dib waxaad ka iibsan kartaa xoqid, u tag qiimaha 4,000 ama u haajirid version hore bixinta kharashka wareejinta.
Waxay sidoo kale furayaan albaabka si loogu rakibo laba mashiin. Sida loo rakibo kombuyuutarka xafiiska iyo mid ka mid ah kombiyuutarada; Tani way jeclaan doontaa; laakiin waxay u muuqataa in aan la qaban baadhid sida Microstation.
Sidoo kale ma sheegin in codsiyada kale ay aadi doonaan Mac, maxaa yeelay hadda waa guddi sawir. Laakiin waxaan idiin xaqiijin karaa in midda xigta ay tahay Maya iyo Inventor. Gaar ahaan, waxaan qabaa tallaabo weyn oo ah AutoDesk, dhinaca niche in dhaqdhaqaaq badan oo dhaqaale oo aan la dayacay ee sano 18. Noocyada Mac-u-qalabsan ayaa hore loo soo sheegay:
In animation: Inventor, Maya, 3ds Max, Alias, Mudo, Sketchbook.
Dhismaha dhismaha: Dhismaha Dib-u-celinta, Qaab-dhismeedka Dib-u-celinta, Dib-u-Celinta MEP
Sida qof ku sheegay forum, warka ayaa sidoo kale u fiican kuwa isticmaala Linux, maxaa yeelay suurto gal ahaan sanado 18 waxaan leenahay qaybin Ubuntu ah. 🙂
Halkan waxaad soo dejisan kartaa qaybta tijaabada. Iyo macluumaad dheeraad ah iyo fiidiyowyo Halkan.
Ma jiri doonaa Microstation for Mac?
Waan ku faraxsanahay in aan arko in lagu soo riixo qalab wax lagu duubo Ipad. Laakiin, uma maleynayo inay sidaas tahay, inkasta oo ay isku dayeen, marxaladdan si fiican ayay u noqon lahaayeen.
Post Previous«Previous Bentley wuxuu doonayaa inuu dgn u noqdo mid caan ah
Post Next MapEnvelope iyo London EyeNext »
2 Jawaab: "AutoCAD waxay dib ugu laabatay Mac"
Waqtigaan xaadirkan suurtagal ma aha in la geliyo sawirrada "ECW" ee Autocad ee MAC. Waxaan soo jeediyay hagaajintan aan u soo jeedinay Autodesk. Si aad u taageerto fikradda u gudub xidhiidhkan http://bit.ly/nP3kbV oo codka adigoo riixaya batoonka + 1.
Dad badan ayaa codsanaya fursado dheeraad ah in la sameeyo
Gerardo isagu wuxuu leeyahay:
INVENTOR AND MAYA, waxaad diyaar u tahay, annaga ayaa ka maqan 3D madani ah